Joyina iHodges yeQela u! Jonga Amathuba ethu eNgqesho
Ngaba Ukulungele Ukujoyina Inqanaba Elilandelayo Kwimfundo Ephakamileyo?
KwiYunivesithi yaseHodges, sizibophezele ekuqeshweni kuphela i-faculty kunye nabasebenzi ukuxhasa abafundi bethu kwiindlela zabo zokuphumelela. Ukuba unomdla wokunceda abanye bafezekise iinjongo zabo, siya kukufuna kwiqela lethu. Ukuba oku kuvakala ngathi nguwe, khetha elinye lamathuba ethu engqesho kwaye ungenise i-CV yakho.
Khuthaza. Joyina iqela leYunivesithi yaseHodges namhlanje!
Khangela Amathuba Engqesho
Malunga neHodges yengqesho
Incoko noGloria Wrenn, uMlawuli kwiCandelo leMicimbi yaBasebenzi:
Yeyiphi eyona nto ibalaseleyo ngokusebenza kwiYunivesithi yaseHodges?
Izizathu ezintathu eziphambili ziya kuba:
Abantu abasebenza apha. IHodges Uninzi losapho lwesibini, kwaye andikaze ndibabone abantu abaninzi kangaka benomdla kwaye besebenza nzima kunye ngenjongo efanayo yokufumana iHodges eyona yunivesithi ibalaseleyo hayi kwi-SW Florida kuphela, kodwa naphina.
Sinabasebenzi abahluka-hlukeneyo nababandakanyayo ngokunjalo - wonke umntu olapha uvela kwenye indawo - kwaye ndicinga ukuba ngenxa yoko abasebenzi bayabamkela abantu abavela kwezinye iinkcubeko okanye imvelaphi.
Singumbutho onobuchule obutsha ngendlela esinikela ngayo iiklasi kubafundi, kwaye sibe liziko eliguqukayo kwaye elinokutshintsha ngokukhawuleza njengoko iimfuno zeyunivesithi okanye zemfundo ephakamileyo zifuna. ”
Zeziphi ezinye izibonelelo zengqesho kuHodges U?
“IYunivesithi yaseHodges imi kwikhampasi entle elangeni iFort Myers, eFlorida, ayitshayi, kwaye ifumene Indawo yokusebenzela eBlue isikhundla, (iziko lemfundo ephakamileyo lokuqala ukwenza njalo kwingingqi) ekhuthaza imikhwa esempilweni. Ukongeza, zonke izikhundla ezisisigxina zibandakanya izibonelelo zesisa ezinokubandakanya izibonelelo zempilo, i-inshurensi, kunye nokurhoxiswa kwezifundo. ”
Amava eFakhalthi kunye naBasebenzi
Yintoni eyona nto intle ngokusebenza apha?
“Ukubukela ubomi babafundi butshintsha. Yenza yonke into endiyenza apha ibe nentsingiselo, ” UTeresa Araque, ukuthengisa kwe-AVP / iGosa loLwazi loLuntu
“Intsapho. Ndinosapho lwam “olwasekhaya” kunye nosapho lwam "olusebenzayo" kwaye bendingenakwenza ngaphandle komnye. Sineentsuku eziphambeneyo njengawo wonke umbutho, kodwa ekupheleni kosuku into esiyenzayo apha ikhetheke ngokwenene. Abantu beza apha bazokutshintsha umkhondo wentlalo-ntle yosapho lwabo luphela kwaye sinceda, ” U-Erica Vogt, uSekela-Mongameli oLawulayo wezoLawulo
“Enye yezona zinto zibalaseleyo ngokusebenza kwiYunivesithi yaseHodges yinkcubeko esondeleleneyo nenenkxaso kubasebenzi bethu. Baye lelona qela labantu bazinikeleyo kwaye banobuchule endakha ndanalo ilungelo lokusebenza nabo, ” UJohn D. Meyer, DBA, Mongameli
IYunivesithi yaseHodges ngumqeshi olinganayo kwaye ayicaluli ngokobuhlanga, ibala, inkolo, isini, inkanuko yesini, imvelaphi yesizwe, ubudala, ukukhubazeka, okanye naziphi na ezinye izinto ezikhuselweyo phantsi komthetho. Zonke izibonelelo zengqesho zikwimeko ekugqityweni ngempumelelo kokutshekisha okungasemva kunye novavanyo lweziyobisi.
IYunivesithi yaseHodges yindawo yabucala, engenzi nzuzo, eyunivesithi eyamkelweyo kwingingqi ekumazantsi mpuma eFlorida ekhonza ikakhulu abafundi abadala.
INgxelo yoKhuseleko yoNyaka kaHodges (iCryry Act yoLwazi kunye noMgaqo-nkqubo) kunye neziBalo zoLwaphulo-mthetho zifumaneka: Ulwazi lwekhasi lomthengi. Ingxelo yezokhuseleko ichaza isiCwangciso soKhuseleko soNyaka sikaHodges kunye nengxelo yoBugebenga yoLwaphulo-mthetho idwelisa inani kunye neentlobo zolwaphulo-mthetho olwenziwa kwikhampasi okanye kufutshane nayo unyaka nonyaka.
Ukuya kuthi ga ngoku kummiselo wokuKhuselwa kweDatha ngokuBanzi ("GDPR"), ndiyavuma ukuqhutywa kweDatha yobuqu njengoko ichaziwe yi-GDPR ngeenjongo ezichaziweyo kwaye zibonelelwa kwimigaqo-nkqubo yeHodges, njengoko ilungisiwe amaxesha ngamaxesha ixesha. Ndiyaqonda ukuba kwiimeko ezithile, ndinelungelo lokuphikisa ekuqhubekekeni kweDatha yobuqu. Ndiyaqonda ngakumbi ukuba ndinelungelo lokucela (1) ukufikelela kwiDatha yoBuntu; (2) ukulungiswa kweempazamo kunye neempazamo kunye / okanye ukucinywa kweDatha yobuqu; (3) iiHodges zithintela ukuqhubekeka kweDatha yobuNtu; kwaye (4) iiHodges zibonelela ngeDatha yobuNtu xa ziceliwe kwifomathi ephathekayo.